Safari 9.0.2 တွင်အရေးကြီးသောလုံခြုံရေးတိုးတက်မှုများထည့်သွင်းထားသည် ငါက Mac ပါ
Safari 9.0.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်အရေးကြီးသောလုံခြုံရေးပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပေးသည်
Miguel အိန်ဂျယ် Juncos | | Apple, NOTICIAS, Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ, Mac ပရိုဂရမ်များ
မကြာသေးမီကအက်ပဲလ် update လုပ် သင်၏ Safari ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ OS X Mavericks 9.0.2, OS X Yosemite 10.9.5 နှင့် OS X El Capitan 10.10.5 တို့အတွက်ရရှိနိုင်သည့် version 10.11 သို့ရောက်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ကွန်ပျူတာသည်ဤဗားရှင်းတစ်ခုခုတွင်ရှိပါကမဆိုင်းမတွမွမ်းမံသင့်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောလုံခြုံရေးတိုးတက်မှုများထည့်သွင်းထားသည့်နောက်ဆုံးပေါ် Safari ဗားရှင်းသို့ချက်ချင်းရောက်ရှိသင့်သည်။ အလားအလာရှိသောတိုက်ခိုက်သူများအတွက် "တံခါးများ" ပိတ်ခြင်း
တစ်ခါတစ်ရံအချို့သော software update များသည်အသေးအဖွဲဟုထင်ရသော်လည်းအမှန်တရားမှာထိုအရာဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီဖို့ရန်အရေးကြီးပါသည် လူသိများအားနည်းချက်များဆန့်ကျင်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခိုးယူရန်သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖေါ်ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်ဟက်ကာများသည်ထိုကဲ့သို့သောအားနည်းချက်များကိုအသုံးချပြီးဆော့ဖ်ဝဲများနှင့်မက်ကွန်ပျူတာများကိုကူးစက်ရန်အန္တရာယ်ရှိသော software ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဤနောက်ဆုံးသတင်းများသည် install လုပ်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်သာကြာပြီး၊ Safari 9.0.2 update နှင့်အတူတူပင်၊ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့တွင်အရေးကြီးသောလုံခြုံရေး patch များပါဝင်သည်။
ဤတွင်စာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် patch အားနည်းချက်များကို Safari 9.0.2 မှာ Apple ရဲ့အဆိုအရ
CVE-2015-7048၊ CVE-2015-7095၊ CVE-2015-7096၊ CVE-2015-7097၊ CVE-2015-7098၊ CVE-2015-7099၊ CVE-2015-7100၊ CVE-2015-7101၊ 2015-7102၊ CVE-2015-7103၊ CVE-2015-7104-
ယေဘုယျအားဖြင့်ဤ CVEs (Common Vulnerabilities and Spouses) သည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံလာလျှင်၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ website မတရားကုဒ်ကွပ်မျက်ခံရဖို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သူတို့သည် WebKit တွင်ရှိသည့်မှတ်ဉာဏ်ဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆိုင်ရာပြvariousနာများကိုလည်းဖြေရှင်းသည်။ ဤပြissuesနာများကိုမှတ်ဥာဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။
CVE-2015-7050: အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ဝင်ရောက်ခြင်းသည်အသုံးပြုသူ၏ရှာဖွေခြင်းသမိုင်းကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ အကြောင်းအရာပိတ်ဆို့ခြင်းတွင်အတည်ပြုပြvalidနာရှိသည်။ ဒီပြproblemနာကိုအကြောင်းအရာတိုးချဲ့စိစစ်မှုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းတယ်။
ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်စနစ်၏သဟဇာတဖြစ်သောဗားရှင်းတွင်ရှိနေလျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် နောက်ဆုံးပေါ် Safari browser ကို install လုပ်ပါ မီနူးကိုရွေးခြင်း၊ အက်ပလီကေးရှင်း ... သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်၊ Mac App စတိုးကိုဖွင့ ်၍ မွမ်းမံမှုများ tab သို့သွားခြင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » Safari 9.0.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်အရေးကြီးသောလုံခြုံရေးပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပေးသည်
အော်စကာ Jimenez ဟုသူကပြောသည်
ဒီ adware နှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပါသလား!?
Oscar Jimenez ကိုစာပြန်ပါ
9.0.2 သို့မဟုတ် 9.2?
ဒီအဖုံးဖြင့်သင်၏ Apple TV အသစ်၏ Siri Remote ကိုကာကွယ်ပါ
Apple ID ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်၎င်း၏ပုံသဏ္renewာန်ကိုအသစ်ပြန်လည်ပေးသည်